डा. दिपक मल्लको सल्लाह : यसरी बच्न सकिन्छ मधुमेहबाट - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ जनस्वास्थ्य ∕ डा. दिपक मल्लको सल्लाह : यसरी बच्न सकिन्छ मधुमेहबाट
डा. दिपक मल्लको सल्लाह : यसरी बच्न सकिन्छ मधुमेहबाट
डा. दिपक मल्ल बिहीबार, २०७६ कात्तिक २८ गते, ११:१८ मा प्रकाशित
मधुमेह भन्नाले हाम्रो रगतमा भएको ग्लूकोजको मात्रा भन्ने बुझिन्छ । यसलाई ‘ब्लड सुगर’ पनि भनिन्छ । सुगर प्रत्येक व्यक्तिको शरीरमा पाइने आवश्यक तत्व हो । सामान्यतयाः कुनै पनि व्यक्तिको सुगर खाली पेटमा परीक्षण गर्दा १२६ र खाना खाएर गर्दा २२० भन्दा माथि भएको अवस्था र शरीरमा हेमोग्लोबिन ए.वन.सीको मात्रा ६.४ भन्दा माथि भएको अवस्थामा हामी त्यसलाई सुगर भन्छौं ।
सुगर विभिन्न प्रकारका भएतापनि प्रायजसोः व्यक्तिहरुमा यसको टाइप १, टाइप २ र जिडिएमएको अवस्था बढी मात्रामा देखा पर्दछ । हाम्रो शरीरमा रहेको प्यान्क्रियाजले खाना पचाउने तथा सुगरको मात्रा नियन्त्रण गरी इन्सुलीनको उत्पादन गर्दछ । तर, कहिलेकाहीं हाम्रो शरीरमा इन्सुलीन नहुने समस्या पनि देखा पर्दछ । त्यस्तो अवस्थालाई भने हामी टाइप १ मधुमेह भन्छौं ।
यसैगरी इन्सुलीन भएतापनि कम रहेको वा पर्याप्त मात्रामा नरहेको अवस्थालाई भने हामी टाइप २ मधुमेह भन्दछौं । टाइप १ मधुमेह व्यक्तिमा जन्मजात रुपमा देखिने भएतापनि टाइप २ मधुमेह भने धेरै तथा बढ्दो उमेर समूहका व्यक्तिहरुमा देखा पर्ने गरेको पाइन्छ । यसैगरी अन्य समयमा सुगर नभएको महिलाहरुमा गर्भ अवस्थाको दौरानमा भने इन्सुलीनमा भएको गडबडीका कारण सुगर पोजिटिभ देखाउने सम्भावना रहन्छ । यसरी २४ हप्तादेखि २८ हप्ताबीचको गर्भवती महिलामा सुगरको अवस्था पोजिटिभ देखाएको अवस्थालाई भने ‘जिडिएम’ भनिन्छ ।
कुनै पनि व्यक्तिमा सुगर भए वा नभएको संकेत हामीले हाम्रो शरीरमा देखा परेको लक्षणबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ । सुगर लागेका व्यक्तिहरुमा साझा रुपमा निम्न लक्षणहरु देखा पर्दछ ः
भोक तथा तिर्खा लाग्नु
छिनछिनमा पिसाब लागि रहनु
थकान तथा कमजोरीको महशुस हुनु
एकध्यान हुन नसक्नु
आँखाको दृष्टिमा कमी आउनु
हामीले आवश्यक भन्दा बढी मात्रामा कार्वाेहाइड्रेटयुक्त खानाहरु खाएको खण्डमा इन्सुलीनमा आएको गडबडी कारण व्यक्तिमा सुगर देखा पर्दछ । तसर्थ, यसको निमित्त हामीले कार्वाेहाइड्रेटयुक्त खानाको प्रयोग धेरै गर्नु हुँदैन ।
सुगरको उपचारको सन्दर्भमा भने, टाइप १ सुगरको निमित्त हामीले ‘इन्सुलीन’ नामक खोप र टाइप २ सुगरको निम्ति भने औषधि वितरण गर्छौ । तर, औषधिको प्रयोगका बाबजुद पनि सुगर नियन्त्रण नआएको अवस्थामा भने उक्त बिरामीहरुलाई पनि इन्सुलीन खोप नै दिनुपर्ने हुन्छ ।
अधिकांश व्यक्तिहरु यस्ता समस्याबाट ग्रसित भएको धेरै समयपछि मात्रै चिकित्सकको सम्पर्कमा आउने गर्छन् । उनीहरु शरीरमा यस्ता लक्षण देखिनु सामान्य मान्छन् । तर, सुगरले व्यक्तिको आँखा, मिर्गौला, खुट्टा र शरीरको अन्य भागमा समेत असर पार्ने भएकोले हामीले यसलार्ई सामान्य रुपमा लिनु हुँदैन । तसर्थ व्यक्तिमा यस्ता समस्या देखा पर्ना साथ हामीले तुरुन्त चिकित्सकको परामर्श लिनु पर्दछ ।
मैले माथि उल्लेख गरे झैं सुगर प्रत्येक व्यक्तिको शरीरमा पाइने आवश्यक तत्व हो ।
तसर्थ, यो पूर्ण रुपमा निको हुन्छ भनेर सोच्नु गलत धारणा हो । उपचार तथा औषधिले शरीरमा घटबढ रुपमा देखा परेको सुगरको मात्रालाई व्यवस्थित गराउने मात्रै हो । यस्तै कतिपय अवस्थामा सुगरका बिरामीहरुमा औषधिको मात्रा प्रयोग गर्दा गर्दै पनि सुगर नियन्त्रणमा नआउने हुन सक्छ । यसको निम्ति औषधि प्रयोग गरिरहेका बिरामीले निम्न कुराहरुमा विशेष ध्यान पुर्‍याउनु पर्दछ :
औषधिको सेवनको सम्बन्धमा चिकित्सकसँग आवश्यक जानकारी लिने
नियमित रुपमा औषधिको सेवन गर्ने
अनुशासित रुपमा चिकित्सकले दिएका सुझावहरु पालन गर्ने
चिल्लो, नुन र मसालायुक्त खानाबाट टाढै रहने
गुलियो र चिनी भएका खाना तथा अन्नहरुको प्रयोग नगर्ने
आवश्यक शारीरिक ब्यायाम गर्ने
मदिरापान तथा धुम्रपानबाट टाढा रहने ।